संसदमा सत्तापक्ष-प्रतिपक्षबीच टकराव :: मनोज सत्याल :: Setopati
संसदमा सत्तापक्ष-प्रतिपक्षबीच टकराव
प्रतिनिधि सभाको बैठक । तस्बिर : निशा भण्डारी/सेतोपाटी
प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टकरावको स्थिति उत्पन्न भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संघीय संसदको नवौं अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन नै प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजीमा उत्रिएको छ भने सभामुख अग्नि सापकोटाले पेलेरै अघि बढ्ने रणनीति अपनाएका छन्।
एमालेले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजीसहित रोष्टम घेराउ गरेको छ। नाराबाजीबीच सरकारले संसदमा अध्यादेश टेबल गरेको छ।
सभामुख सापकोटाले बुधबार तीन वटा बैठक सञ्चालन गरेका थिए। पहिलो बैठक एमालेको नाराबाजीपछि सभामुखले रोकेका थिए। तर दोस्रो बैठकमा उनले नाराबाजीबीच मौनधारण कार्यक्रम र प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखको अनुपस्थितिमा अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको नाम पढेर सुनाएका थिए। एमाले सांसदको नाराबाजीबीच सभामुख सापकोटाले दोस्रो बैठक २० मिनेट सञ्चालन गरेका थिए।
तेस्रो बैठकमा भने उनले नाराबाजीबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश टेबल गर्न समय दिए। प्रतिपक्षी सांसदहरूले रोक्ने प्रयास गरे पनि मर्यादापालकको सहयोगमा खाँण रोष्टम पुगेर अध्यादेश टेबल गरे। प्रतिनिधि सभा बैठकमा केहिबेर घम्साघम्सीको स्थिति पैदा भयो।
के भयो पहिलो बैठकमा?
नेकपा एमाले सांसदहरूले सभामुखले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएको राष्ट्रपतिको पत्र संसदमा पढेर सुनाएलगत्तै विरोध गरेका थिए।
एमाले सांसदहरूले सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दल फुटाएको आरोप लगाउँदै विरोध गरेका थिए।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सांसदले अनुशासनको उल्लंघन गरेको किटान गर्ने अधिकार राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिलाई भएको उल्लेख गरे।
उनले सभामुखले एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका सांसदलाई कारबाहीको सूचना प्रकाशित नगरेको आरोप लगाए। नेकपा एमालेले भदौ १ गते माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो।
'हामीले सूचना आउँछ कि भनेर प्रतीक्षा गर्‍यौं। २ गते सूचना प्रकाशित भएन। जनता समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई निष्कासन गर्दा १८ घण्टा नपुग्दै निष्कासनको सूचना गर्नुभएको छ। २४ घण्टा नबित्दै माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित सांसदहरूको हकमा संसद बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको छ', भट्टराईले भने, 'माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको हकमा मात्र त्यो नियम लागु हुन्छ कि नेकपा एमालेको हकमा पनि लागु हुन्छ। सभामुख आसनमा बसिरहँदा मर्यादा भनेको सबै दलप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार हो कि हैन?'
उनले एमाले सांसदको हकमा किन सूचना निकाल्नु भएन? भनेर प्रश्न गरे।
'पटक-पटक हामीले फोन गर्‍यौं। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले फोन गरेर जानकारी गराउनु भएको छ। तर १३ औं दिनमा पार्टी टुक्राएपछि केही गर्न नपर्ने हिसाबले सभामुखले यो काम गर्नु भएको छ', भट्टराईले भने, 'सभामुख महोदयले नेकपा एमालेले कारबाही गरेका आफ्ना सांसद बचाउन र एमाले टुक्र्याउन किन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? किन दल विभाजनका मतियार बन्नुभयो? भन्ने प्रश्न आज संसद समक्ष जोडदार रूपमा उठाउन चाहन्छौं। यसको उत्तर हामीलाई चाहिएको छ।'
भट्टराईले जवाफ मागेपछि सभामुख सापकोटाले जवाफमा आफूले प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर निर्णय लिएको बताए।
उनले एमाले विभाजन र सांसदलाई निष्कासनको सूचनाबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको सम्झाए। तर एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको रोष्टम घेराउ गरेपछि सभामुख सापकोटा आक्रोशित भएका थिए। उनले एमाले सांसदहरूलाई नियमावली हेर्न सुझाए।
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २१ को खण्ड (ग) र (घ) सम्झाए। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम २१ को खण्ड 'ग' मा सभामुखको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था छ।
एमाले सांसदहरूले सभामुख सापकोटाले एमाले फुटाएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूले सभामुखको आसनमा बसेर सापकोटाले पक्षपात गरेको आरोप लगाएका हुन्। माओवादीले सांसदहरूलाई कारबाहीको सूचना दिँदा संसदमा जानकारी गराउने तर आफ्नो पार्टीले दिएको कारबाहीको सूचना प्रकाशन नगरेको आरोप एमालेको छ।
सभामुख सापकोटाविरूद्ध एमाले सांसदहरूले रोष्टम अघि उभिएर नाराबाजी गरेका थिए। लगत्तै सभामखुले नियम सम्झाएका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा सांसदहरूले संसदमा बोल्दा 'सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने' उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि टिप्पणी गर्न निमायवलीले रोकेको छ। नियम २१ को 'घ' मा संविधानको धारा १०५ ले बन्देज लगाएको विषयमा प्रतिनिधिसभामा बहस गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १०५ ले 'नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन। तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन', लेखिएको छ।
नेकपा एमाले विभाजनको विषयमा सभामुख र निर्वाचन आयोगविरूद्ध सत्तारूढ नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
एमालेको मुद्दामा आउँदो २८ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल हुँदैछ। सभामुखले नाराबाजीबीच पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए।
के भयो दोस्रो बैठकमा
सभामुख सापकोटाले दोस्रो बैठकमा प्रतिपक्षीको नाराबाजीबीच गणतन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिमा जीवन उत्सर्जन गर्ने सहिदका लागि मौनधारण गराए।
उनले मौनधारणाका आह्वान गरेपछि एमाले सांसदहरू रोष्टमको ठिक अघि चुप लागेर उभिएका थिए। लगत्तै सभामुखले नाराबाजीबीच सभामुखको अनुपस्थितिमा संसद बैठक सञ्चालन गर्ने सांसदहरूको नाम सुनाए।
सभामुखले बोलिरहँदा एमाले सांसदहरूले सभामुखले विभेदपूर्ण व्यवहार गरो भन्दै नारा लगाए।
'विभेदपूर्ण व्यवहार बन्द गर। संसदीय मर्यादा कायम गर। पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर। पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद', जस्ता नारा एमाले सांसदहरूले लगाएका थिए।
माओवादीले सांसद निकाल्दा संसदमा २४ घण्टा नबित्दै संसद बैठमा सुनाएको तर एमालेले अनुशासनको कारबाही गरेका सांसदको सूचना प्रकाशित नगरेको आरोप एमालेको छ। जसलाई उसले सभामुखको पक्षपातपूर्ण व्यवहार भनेको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले आफू 'संविधान नियम कानुन ऐन अनुसार अघि बढ्न प्रतिबद्ध' रहेको बताएका छन्।
उनले सदन चलाउन पटक-पटक एमालेलाई आग्रह गरे। तर एमाले सांसदहरूले पार्टी 'फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद'को नारा लगाइरहे।
सभामुख सापकोटाले नाराबाजीबीच 'मैले संविधान कानून बर्खिलाप केही गरेको छैन। सदन सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहोस्' भन्दै आग्रह गरे। तर एमाले सांसदहरूले 'पार्टीले कारबाही गरेका तथाकथित सांसदलाई निष्कासन गर' भन्दै नारा लगाए।
एमालेले माधव नेपालसहित पार्टीले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई 'गैरसांसद'का रूपमा टिप्पणी गरेको छ।
एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहँदा दलका नेता केपी शर्मा ओली भने आफ्नो कुर्सीमा बसिराखेका थिए।
एमालेले गत भदौ १ गते माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी सभामुखलाई दिएको थियो। तर सभामुखले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार माधव नेपालसहित कारबाही गरिएका भनिएका १४ सांसदले नयाँ दल दर्ता भएको उल्लेख गर्दै भदौ १३ गते एमालेले दिएको जानकारी प्रकाशित नगर्ने निर्णय लिएका थिए।
एमालेले सभामुखले १३ दिनसम्म सूचना नटाँसेको र निर्वाचन आयोगलाई एमालेले कारबाही गरेका सांसदको विवरण उपलब्ध गराएकाले त्यो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेको छ।
सभामुख सापकोटाले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभामा नाराबाजी जारी राखेको थियो।
नाराबाजीपछि प्रतिनिधिसभा बैठक फेरि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो।
के भयो तेस्रो बैठकमा ?
तेस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले समय दिए।
गृहमन्त्री खाँणले1 समय पाएपछि मर्यादापालकको सुरक्षामा रोष्टममा उक्लिएका थिए। नेकपा एमालेका सांसदहरूले खाँणलाई रोष्टममा पुग्न रोक्न खोजे पनि सफल भएनन्। मर्यादापालकहरूले एमाले सांसदहरूलाई रोष्टममा रहेको खाली स्थानको प्रतिपक्ष तर्फको बीचमै बार लगाएर रोकिदिएका थिए।
सरकारले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी दल विभाजनमा सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत सांसद भए दल विजभान गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याइदिएको थियो।
उक्त अध्यादेशपछि दुबै दल विभाजन भइसकेका छन्। एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ भने जनता समाजवादी फुटेर जसपा लोकतान्त्रिक गठन भएको छ।
नाराबाजीबीच खाँणले अध्यादेश टेबल गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक भदौ २५ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ।